Travel World: December 2011
Posted by Travel at 8:53 PM0comments
New holiday village in Wales to cater to wealthy Chinese travelers
Paris travel: Go around the city in Tuk-Tuk taxis?
Qatar Airways reveals expansion plans for 2012
Posted: 30 Dec 2011 06:51 PM PST
A new £50 million holiday village is set to rise in the center of Wales designed specifically for well off Chinese travelers. The village locatedafew minutes from Llandeilo in Carmarthenshire will...
Posted: 30 Dec 2011 06:45 PM PST
You have several options when going around the City of Lights. They have the usual public transport plus the greener options– electric cars. Another Paris transport option has arrived though,...
Posted: 30 Dec 2011 06:40 PM PST
Qatar Airways will be adding more destinations to their existing routes come 2012 with focus on Europe, Middle East, Africa, and Australia further increasing the span of their growing international...
Posted by Travel at 5:42 PM0comments
Re: ဧည့်လမ်းညွှန်များ သတိပြုစရာ (၂၀) အင်းဝ မြင်းလှည်း
ပြောခဲ့တာလဲ များလှပါပြီ။ ဘယ်သူကမှ အရေးမလုပ်ကြ။ တံတားဦး စည်ပင်ကလည်း သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလို၊ ရှေးဟောင်းကလည်း စည်ပင်အလုပ်ပဲဆိုပြီး ကြည့်နေ။ ဟိုတယ်၊ခရီး ဦးစီးကလည်း သိတော့သိတယ်။ မြင်းလှည်းအဖွဲ့လည်း ပိုက်ဆံကုန်လှပြီ၊ လမ်းမရှိတော့လိုက်၊ မြေကွက်ကို လမ်းလုပ်ရအောင် ပိုက်ဆံစုပြီး ၀ယ်ကြ။ အခု ထပ်ပါသွားပြန်ပြီ ဆိုတော့ ထပ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစား၊ လမ်းကလည်း မြင်ကြတဲ့အတိုင်း မြစ်ထဲကို ခုန်ချရတော့မလို။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆိုတာပဲ ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။
2011/12/29 ThaToe ThuZarAung <thatoe.thuzaraung@googlemail.com>
Dear Ko Yan Naing Htun,
For my point of view, as it is in very dangerous situation, we should inform it to MTT and authorities in Mandalay shortly ( with photo attached) instead of waiting till someone or horse cut fall out of the ridge.
Your post is very helpful and thanks for your information which concern all of us.
Myanmar-Asie du Sud Est Voyage
Room-224 & 225, No-350, Summit Parkview Hotel
Dagon Township, Alone Avenue,
Post Code: 11121, Yangon, Myanmar.
Tel : 00 95 (1) 217103
Fax : 00 95 (1) 217224
E-mail : myanmarasev.MD@mptmail.com.mm;
Skype ID : thatoethuzaraung1
2011/12/28 yannaing htun <yannainghtun08@gmail.com>
Dear Ko Thaung Naing Oo,
Thank you very much for your information. I do thank Ko Aye Min Tun for his discussion and explanation to horse cart association in Ava. There were some mistakes and inproper works in the service of Ava cart association. And it is our responsibility to correct and explain what is good and what is bad. We need to educate, co-operate and help our locals as they did not get chances like us for education.
We also need help from authority concerns to improve the safety of the horse cart riding roads or tracks in Ava because the tracks are really dangerous in some parts. It is obvious in my attached photos how dangerous it is by the river bank. Only one horse cart can drive now due to erosion by the bank and it is like driving on the ridge. My clients dare not look down the ridge. It is extremely dangerous when it is raining. The Ava Horse cart association was trying to get another lane for the next season as they did not believe that ridge-road will exist in coming season.
I think we should ask them to change the track/ road as soon as possible because any one/cart can fall out of the ridge. If it happened, it could beavery bad image for Ava tour site and our tourism. The little accident what you have mentioned can beawarning for all of us. We have reported that danger in last rainy season and I did not hear anything about that again. So, we should plan to do something for that. I do hope all guides will be willing and able to help this together.
Yan Naing Htun (Mandalay).
Posted by Travel at 4:07 PM0comments
Re: Happy New Year to all travel partners
And u also& thank u fr ur wishes.
On 31 Dec 2011 21:11, "Nyi Nyi ®" <nyinyi@gmail.com> wrote:
Wishing you GUYS!! the tourism gurus.. an Another Happy and Prosperous
On 12/31/11, Bo Saw <saww.myanmar@googlemail.com> wrote:
> Happy and prosperous new year to all our travel society and 2012
> brings best news for all Myanmar Tourism.
> Myanmar become the 3rd travel top destinations in the world for year
> 2012 by CNN news choice.
> Best Wishes ,
Posted by Travel at 10:04 AM0comments
Dear my colleague,
I would like to greeting to you all and HAPPY AND HEALTHILY for you life.
Posted by Travel at 9:29 AM0comments
Posted by Travel at 9:14 AM6comments
Fwd: ဧည့်လမ်းညွှန်များ သတင်း (မန္တလေးတောင် ကားပါကင်)
From: Thaung Naing Oo <thaungnaingoo.007@gmail.com>
Date: Fri, 30 Dec 2011 14:22:16 +0630
Subject: ဧည့်လမ်းညွှန်များ သတင်း (မန္တလေးတောင် ကားပါကင်)
ဧည့်လမ်းညွှန်များ သတင်း (မန္တလေးတောင် ကားပါကင်)
နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တော်များဟာ Sun Set ကြည့်ပြီးသည်နှင့် တောင်ပေါ်မှ
ပြန်ဆင်းသည့်အခါ ဓါတ်လှေခါးများ အသုံးပြု၍မရတော့ပါ။ ထိုအခါ ခြေလျှင်ဆင်း၍
ပြန်ကြရသည်တွင် ကားပါကင်ကွင်းသို့ရောက်သည်နှင့် မိမိကားများရှိရာအထိ
ဖိနပ်မပါပဲ ခြေတုံးလုံးဖြင့်လမ်းလျှောက်၍ သွားကြရပါသည်။ အချို့မှာ
တော်တော်ပင်ဝေးလှသဖြင့် သူတို့၏ ခြေဖဝါးနုနုများမှာ မခံရပ်နိုင်အောင်
နာကျင်ခံစားကြရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း
အတွင်းရေမှူး ဦးဝင်းဇော်ဦးမှ မန္တလေးတောင်သာယာစိုပြေရေးကော်မတီထံသို့
သွားရောက်၍ အဆိုပါ မော်တော်ကားပါကင် နေရာအား MTGA အသင်းမှ
မန္တလေးတောင်သာယာစိုပြေရေး ကော်မတီကလည်း ကြည်ဖြူစွာပင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် မန္တလေး Tour ကားဆရာများ ကလည်း ငွေအင်အား
အကူအညီပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အလှူရှင်များစွာလည်း ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ MTGA နှင့် Tour ကားဆရာများ အတူပူးပေါင်း၍ မကြာမီ
မန္တလေးတောင် မော်တော်ကားပါကင် တွင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
အကြောင်းကြားလာပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တတ်နိုင်သရွေ့
ကုသိုလ်အလှူငွေပါဝင်ထည့်လိုသူများ အောက်ပါ ဖုံးနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်ကြပါရန်
ဦးရန်နိုင်ထွန်း (ဖုံး ၀၉ ၂၀ ၂၄၇၀၁ )
Posted by Travel at 7:47 AM0comments
Posted by Travel at 6:38 AM0comments
Happy New Year to all travel partners
Happy and prosperous new year to all our travel society and 2012
brings best news for all Myanmar Tourism.
Myanmar become the 3rd travel top destinations in the world for year
2012 by CNN news choice.
Posted by Travel at 4:15 AM 1 comments
၂. ပါသော ( မိန်.ခွန်းပြောကြားပေးပါသော....လိုအပ်သည်များကိုနှမ်းဖြူးပေးပါသော....)
၄. ကျွန်တော်တို. ( မိုက်နဲ.ပြောရင် အခါ ၁၀၀ လောက် ထပ်ထပ်ပြော )
အဲဒီလို စကားပြောမျိုးတွေ ဘယ်သူတွေက ဘယ်အချိန်လောက်ကစထွင်လိုက်သလဲဆိုတာ
On 12/30/11, n Walker <corner88.mandalay@gmail.com> wrote:
> n Walker က၊ MTB, MTGA ရဲ့၊ ဖြစ်တည်ပုံ၊
> ထပ်ဆင့်၊ ယခုလက်ရှိ MTGA ရဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေမူ့၊ (အများအသိပါ) (
> ၀န်ကြီးဌာနမှ၊ လိုအပ်ချက်များကိုတော့၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ၊ သတင်းပေးပို့၊
> မဖြစ်မနေဖော်ဆောင်ပေးပြီး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များဘက်က၊
> လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတဆင့်ခံပြန်လည်မေးတော့၊ လိုင်းအောက်နေတာလိုလို၊
> ဆက်သွယ်မူ့ဧရိယာပြင်ပရောက်နေတဲ့၊ လူကြီးမင်းဖုန်းလိုလို၊
> လုပ်ကိုင်ဖြေကြား ) သည်အခြေအနေတွေကို၊ အားကိုးလောက်ဘွယ်၊
> အယုံအကြည်မရှိတဲ့အတွက်၊ အသင်းမ၀င်။
> သို့သော်လည်း၊ n Walker ရဲ့၊ တကိုယ်ရေယုံကြည်မူ့နဲ့၊
> လွတ်လပ်မူ့ဟာ၊တပါးသူကိုမထိခိုက်စေခြင်သလို၊ သူတပါးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
> MTGA ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ n Walker နှင့်တကွ၊ တခြားသော၊ n Walker
> လိုသူများတွေကိုမထိပါးစေခြင်လို့၊ MTGA ကို၊ ဦးတည်ပြီးသတိပေးရေးနေတာ၊
> ရင်ခုံသံခြင်းညှိနေတာကို၊ လက်တွေ့မဆန်တာလိုလို၊
> အများအတွက်မဟုတ်တာလိုလိုနဲ့ပြောနေပြန်ပြီ။ ညစ်တယ်။
> သည်နေ့မြန်မာပြည်စာပေလောကမှာ၊ ရေးနေကြတဲ့၊ စာရေးသူများဟာ၊
> လက်တွေ့မဆန်တဲ့အလုပ်တွေကို၊ ပြောနေ၊ ဆိုနေ၊ ရေးနေ၊ ဝေဖန်နေတယ်လို့များ၊
> မှတ်ယူနေသလား။ ဘာသာရေးတရားဟောဆရာတော်တွေဟာလဲ၊
> သူတို့ကိုယ်တိုင်မပါဝင်မပတ်သက်တဲ့၊ အိမ်ထောင်သားမွေးလောကီအလုပ်တွေကို၊
> ဟောနေပြောနေတာတွေဟာ၊ လက်တွေ့မဆန်ဘူး၊
> အများအတွက်လက်တွေ့မကျဘူးလို့ဆိုခြင်လေသလား။ သို့မဟုတ်၊
> ယခုလုပ်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို၊ မစဉ်းစားပဲ၊ ထောက်ခံလို့၊
> ဦးစွာ၊ MTGA ကိုဝင်ရောက်မှသာ၊ အများအတွက်လက်တွေ့ဆန်တယ်လို့ဆိုလိုတာလား။
> ဒါမှ၊ တကယ်၊ ညစ်စရာ၊ သံသယအပြည့်နဲ့၊ ညစ်ရပြန်ပြီ။
> အတွေးရှင်းရင်၊ အရေးရှင်းမယ်။ အတွေးကောင်းရင်၊ အရေးကောင်းမယ်။
> အတွေးတတ်ရင်၊ အရေးတတ်မယ်၊ အတွေးသန့်ရင်လဲ၊ အရေးသန့်မှာပဲ၊ ငါ့ညီ။
> သည်နောက်၊ အပြောရော၊ အလုပ်ပါ၊ ရှင်း၊ ကောင်း၊ တတ်၊ သန့်ဖြစ်လာရမှာပေါ့။
> သည်တော့၊ သူတပါးပြောတာကို၊ များများဖတ်၊ များများနားထောင်၊များများတွေး၊
> ကောင်းကောင်းတွေး၊ ကောင်းကောင်းရေး၊ ကောင်းကောင်းပြော၊
> ကောင်းကောင်းလုပ်ကွာ။ ၂ထောင့်ညီလို့၊ နှစ်နားညီတယ်လို့ချည်းပဲ၊
> မျက်စေ့မှိတ်စွတ်မအော်မိစေနဲ့၊ ၂နားညီရင်၊ နှစ်ထောင့်ကလဲ၊
> ညီနေတယ်ဆိုတာကိုလဲ၊ သိထားအုံးဟေ့၊ အကိုကြီးလို့ခေါ်လိုက်လို့၊
> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပေါ့၊ သည်နေ့၊ MTGA
> ရဲ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေမူ့တွေသည်၊ n Walker ရဲ့
> သဘောထားနဲ့မတိုက်ဆိုင်လို့၊ ဝေးဝေးနေလိုသော်လဲ၊
> သည်နေ့၊ MTGA ရဲ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေမူ့တွေသည် n Walker အတွက်၊
> ဖြစ်လဲဖြစ်သင့်ပြီး၊ ရလဲရသင့်ကာ၊ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မူ့လဲရှိနေတဲ့၊
> ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေကို၊ ထိပါးလာနေသည်လို့ ယူဆပြီး၊ သည်မီဒီယာကနေ၊
> ရေးချပြောပြနေရပါသည်။ အလားတူ၊ သည်နေ့၊ MTGA ရဲ့တချို့သော၊
> လွတ်လပ်သောလူမူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် (သက်သက်) ဟန်အပြည့်ရှိနေရမည်ကို၊
> ကျနော်၊ n Walker ပါ။ ယခုတလော၊ ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလို၊ ဒီမိုကရေစီ၊ နှင့်၊
> အများအတွက်ဆိုတာထက်၊ ယခုလောလောဆယ်၊ တောင်းဆိုအကြံပြုနေတာမှန်သမျှသည်၊
> မိမိအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်လို့၊ အောင်မြင်ရာမှတဆင့်၊
> အများကောင်းကျိုးပြည့်စေရလိုသူဖြစ်ပါသည်။ အတ္တဆန်တယ်လို့ဆိုခြင်ဆို။
> အများအတွက်ရယ်၊ အပြုသဘောရယ်ဆိုတဲ့၊ စကားလုံးများ၊
> မြန်မာ့လူမူ့အသိုင်းအ၀န်းမှာ၊ အခွန်ဆောင်ပြီးမှ၊
> သုံးစွဲရန်ဥပဒေပေါ်လာရင်ကောင်းမှာပဲ။ ကြားခဲ့ရတာနှစ်များစွာရှိပြီဆိုတော့၊
> နားထဲလျှံနေလှတဲ့၊ ကျနော်၊ n Walker။
> On 12/30/11, khin thidar <gorose.myanmar@gmail.com> wrote:
>> ဥက္ကဌကြီးလဲ ဘာမှမေးမရပါဘူး MTT လဲ ဘာမှမေးမရပါဘူး ဘာမေးလိုက်မေးလိုက်
>> ၀န်ကြီးခဏခဏပြောလေ.ရှိတဲ. စကားလုံးအတိုင်း ၀ါးတားတား ဘဲဖြေကြပါတယ် ဘာမှ
>> တိတိကျကျ မဖြေတာ ခက်ပါတယ် မေးပေါင်းလဲများလှပေါ. ကြာလာတော.မေးတဲ.လူတောင်
>> လေကုန် လက်ပန်း ကျလာပါပြီ so far so good နေလိုက်တာမှ စိတ်ချမ်းသာရဦးမယ်
>> ပြသနာက တာဝန်မခံရဲကြတာပါ အကြောက်ကြီး ကြောက်ကြတာပါ ဒီခေတ်ဟောင်းစနစ်ဟောင်းက
>> ကြောက်မွေးတွေ ဇာဂနာနဲ. မနှုတ်သရွေ. ဂျပ်အေးသူ.အမေရိုက်နေဦးမှာပါ
>> နှစ်သစ်မှာဧည်.လမ်းညွှန်အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ကျမ္မာပြီး
>> တိုးတွေအများကြီးရ မုန်.ဘိုးအများကြီးပေးတဲ.ဧည်.သည်နဲ.ဘဲဆုံ( စပိန် လို
>> ကော်များလဲ ၈၀% ရပြီး အနှောက်အယှက်ပယောဂဘေးများမှ ဝေးကြပါစေ။
>> 2011/12/29 n Walker <corner88.mandalay@gmail.com>
>>> အခုတလောကြားနေရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့၊
>>> ဂီတစညိးအရုံးတို့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြဘို့ဆိုပဲ။ သည်အဖွဲ့အစည်းဟာ၊
>>> တခုသောအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေ့တော့၊
>>> ခေတ်ပြောင်းစံနစ်ပြောင်းဆိုတာနဲ့အညီ၊ သည်အဖွဲ့တွေက၊
>>> မည်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မည်သည့်နိူင်ငံရေးအရောင်အသွေးတွေနဲ့မှ၊
>>> မရောစွက်စေပဲ၊ အဖွဲ့သားတွေစစ်စစ်နဲ့ပဲ၊
>>> လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်လာဘို့၊ ပြောနေလှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။
>>> သည်အချိန်မှာ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်းဆိုတာက၊ ခုလို၊ သူများတွေ၊
>>> ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ၊ ပြောင်းလဲဘို့ကြိုးစားတွန်းကန်နေကြချိန်မှာ၊
>>> အများနည်းတူ၊ တက်ညီလက်ညီ၊
>>> ၀န်ကြီးဌာနရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခံနေရမူ့တွေထဲကနေ၊ လွတ်ထွက်ပြီး၊
>>> တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်၊ ရောက်ရှိအောင်၊
>>> ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေကိုလဲ၊ ပုဂိုလ်ရေးအာဂတ၊ အုပ်စုအာဂတာတွေမထားကြပဲ၊
>>> အားပေးသင့်ပါတယ်။ အကြံပြုသင့်ပါတယ်။ ဆိုတော့၊ n WAlker ပြောနေတာသည်၊
>>> ဘယ်သူဥက္ကဌ၊ ဘယ်သူ၊ ဘာအဆင့်ဆိုတာမျိုးအတွက်၊
>>> MTGA သည်၊ အစိုးရဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိူင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်များသက်သက်များဖြင့်သာ၊ အများဆန္ဒနဲ့အညီ၊ ဖွဲ့စည်းကြပြီး၊
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်များအရေးသက်သက်သာ၊ လွတ်လပ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့၊
>>> အလုပ်မျိုးတွေ၊ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြင့်၊
>>> တဘက်တလမ်းမှ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
>>> ( Smart Card သည် MTGAကထုတ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာ နက ထုတ်တာပါ
>>> ။ ယူနီဖောင်းဆိုတာလဲMTGA ကတီထွင်တာမဟုတ်ပါ ။ ၀န် ကြီးဌာနက အမိန်.ထုတ်တာပါ
>>> ။) (မိမိတို့သိလို၊ မေးလို၊ ငြင်းလို၊ တာမှန်သမျှကို၊
>>> ဆိုတဲ့၊ သတင်းဖြန့်ချီတာထက်၊ စာပို့လုလင်တာဝန်ထက်မပိုတဲ့၊
>>> အလုပ်တာဝန်မျိုးနဲ့သာ၊ အဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်နေကြရင်၊ MTGA ဆိုတာရှိနေသရွေ့၊
>>> ဟိုတယ်ခရီးအတွက်၊ နဂိုမူလသဘောသဘာဝအရ၊ တစစီရပ်တည်နေကြတဲ့၊
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်များထံ၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ လိုအပ်သလို၊
>>> ထိန်းချုပ်ဆက်သွယ်နိူင်သည့်၊ ဆက်သွယ်ကြားခံတခုအဖြစ်သာရှိနေကြပါမယ်။
>>> ( ဥက္ကဌ ဒေါ်ဌေးဌေးတင် စကားပြော foul
>>> တာတွေရှိပေမယ်.အမှုဆောင် အများစုဟာ ဂိုဒ်တွေအားလုံးအကျိုးကို
>>> စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ.လုပ်နေကြတာပါ )
>>> ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲ၊ MTGA
>>> သည်အဖွဲ့တခုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားရပ်တည်သင့်ကြပါတယ်။ တဦးတယောက်ကိုပဲ၊
>>> ဦးတည်တဲ့၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဆန်တဲ့၊ ကောင်းမွေဆိုးမွေ၊ အရာရာကို၊ ဥက္ကဌ
>>> ဆိုတာကိုပဲ၊ ပုံအပ်နေလို့မသင့်ပါ။ ဥက္ကဌဆိုတာကလဲ၊ သူမသိပါ၊
>>> အောက်ခြေကလုပ်တာပါ၊ ဆိုတာမျိုးတွေလဲ၊ မဖြစ်သင့်ပါ။
>>> အသင်းသားတယောက်ယောက်ကနေ၊ နားမလည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ n Walker
>>> တို့မေးတာကိုလဲ၊ ညစ်တွန်းတွန်းတဲ့မေးခွန်းလို့ပဲထင်ထင်၊
>>> ဖြေကြားရှင်းလင်းကြရာမှာ၊ တာဝန်ခံပြီးဖြေကြားပေးခြင်းမရှိပဲ၊
>>> ဥက္ကဌကြီးသို့ဆိုတာမျိုး၊ တိုတယ်ခရီးသို့ဆိုတာမျိုးတွေ၊ လမ်းညွှန်ပေးတာကို၊
>>> MTGA အဖွဲ့မှ၊ အတတ်နိူင်ဆုံးရှောင်ရှားပေးကြစေလိုကြောင်း၊ အပြုသဘောနဲ့၊
>>> n Walker
>>> On 12/28/11, minmin tun <minmin893@gmail.com> wrote:
>>> > ကိုညီထိုက်ရေ သမ္မတဆီကိုတင်တဲ့စာ ရဲ့ ရက်စွဲလေးကို
>>> > သေသေခြာခြာဖတ်ပေးပါခင်ဗျား။ ရက်စွဲက၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ ပါ။
>>> > " > အဖြစ်မှန်မသိတဲ့၊သတင်းအတိအကျမရတဲ့ကျုပ်တို့လိုGuide
>>> >> တွေရဲ့လက်မှတ်တွေယူပြီးလုပ်ထားတာလား၊ဖြေပါ။ " ဆိုတော့
>>> > ၁၀ရက်နေ့ Asia Plaza ပွဲမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးထားတဲ့ စာရွတ်သည်
>>> > လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေကိုပို့ဖို့သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။
>>> > နောက်မေလမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မည် ဆိုသည်မှာ
>>> > ဧည့်လမ်းညွှန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ရက်သတ်မှတ်မှာ
>>> > ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိ MTGA မှ အရည်အချင်းရှိသော၊
>>> > သဘောထားမှန်သောပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အများရွေးခြယ်ရင်
>>> > ပြန်ပါလာပါလိမ့်မယ်။
>>> > နောက်ကိုညီညီရဲ့စာကို ပြန်ရှင်းပြရရင်
>>> > " သူတို.ပြောတဲ.ထဲမှာ MTGA ကထုတ်တဲ. စမတ်
>>> > ကဒ် ကို မချိတ်ဆွဲ နိုင်ဘူးဆိုတာပါတယ် ။ Smart Card သည် MTGA
>>> > ကထုတ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာ နက ထုတ်တာပါ ။ "
>>> > ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ စဉ်းစားစရာတောင်မလိုအောင် ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ Tour Guide
>>> > Licensed Smart Card မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
>>> > " ယူနီဖောင်းဆိုတာလဲ
>>> > MTGA ကတီထွင်တာမဟုတ်ပါ ။ ၀န် ကြီးဌာနက အမိန်.ထုတ်တာပါ ။ "
>>> > ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ အဲ့ဒီအမိန့်စာလေး online တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။
>>> > " MTGA ဟာ ၀န်ကြီးဌာနကို အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး ဂိုဒ်တွေဘက်က
>>> > ခုခံကာကွယ်နေတဲ.အဖွဲ.ပါ ။ ဥက္ကဌ ဒေါ်ဌေးဌေးတင် စကားပြော foul
>>> > တာတွေရှိပေမယ်.အမှုဆောင် အများစုဟာ ဂိုဒ်တွေအားလုံးအကျိုးကို
>>> > စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ.လုပ်နေကြတာပါ ။ MTGA မှာ ပါတိုင်း လူဆိုးတွေလို.
>>> > သတ်မှတ် လို.မရပါဘူး ။ လုပ် ချင်တယ် ဆိုရင် ၊ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင် MTGA
>>> > အမှုဆောင်များအားလုံး အခုချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ပြီး အာ
>>> > ဏာလွှဲပေးဖို.အသင်.ရှိပါတယ် ။ " ဧည့်လမ်းညွှန်တွေသည်
>>> > ညီအစ်ကိုမောင်နှမ များသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်သူက လူဆိုး။ ဘယ်သူကသူခိုး။
>>> > ဘယ်သူက အရူး။ ဘယ်သူက လူမိုက် ရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။
>>> > ဒီနေရာမှာ ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ တချို့ရဲ့စေတနာက
>>> > ၀က်သမားစေတနာဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်စေတနာပါ။ ၀က်သတ်သမားက
>>> > ၀က်တွေမွေးထားပြီး အစာနေ့တိုင်းကျွေးတယ်တဲ့ အစာကျွေးရင်းနဲ့ ပြောသတဲ့
>>> > "စား၊စား များများစား။ မင်းတို့များများစားမှ အသားတိုးပြီး
>>> > အလေးချိန်စီးမှာ" ဆိုပြီးပြောသတဲ့။ နောက်စေတနာတစ်မျိုးက မိဘက
>>> > သားသမီးကို အစာကျွေးရင်း သားသမီးစားနေတာကြည့်နေတဲ့ ပီတိ၊ စေတနာ
>>> > ကမေတ္တာစေတနာ၊ ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်စေတနာက စေတနာမှန် ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
>>> > ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်စေတနာနဲ့ ပရဟိတအကျိုး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်အများအကျိုးကို MTGA
>>> > မှာလုပ်နေပါသလဲသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
>>> > Groups
>>> > "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>>> > Burma)" group.
>>> > To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>> > travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>> > http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
Posted by Travel at 12:53 AM0comments
Re: to accept me
Dear Ma War,
On Fri, Dec 30, 2011 at 6:19 PM, Wah Wah <wahwah1281986@gmail.com> wrote:
I am working in tourism business ,Please accept me.
Posted by Travel at 8:22 PM0comments
Re: မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်သစ်နှစ်စင်း ဝယ်ယူမည်
Dear Nyi Ny,
Thansk for your sharing.
But my computer can't read Myanmar Version.
So, what is your information, I don't know.
2011/12/30 Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com>
နိုင်ငံပိုင် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းက
ပြည်တွင်းမှာ ပျံသန်းပြေးဆွဲဖို့ လေယာဉ်အသစ် နှစ်စင်း ဝယ်ယူဖို့
စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ "လေယာဉ်အသစ် နှစ်စင်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ
အကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ဝယ်ယူမှာ၊ အဲဒီလေယာဉ်တွေကို မြန်မာ့လေကြောင်းက
ပြေးလမ်းတို လေယာဉ်ကွင်းမှာ အသုံးပြုသွားမှာ" လို့ မြန်မာ့လေကြောင်းမှ
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးညွန့်လွင်က ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့လေကြောင်းက
ဝယ်ယူမယ့် လေယာဉ်အမျိုးအစားက Beechraft 1900 D အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
ပြင်သစ်နိုင်ငံက မှာယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးအတွက် သာမက
ကုန်တင်လေယာဉ် အဖြစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဝယ်ယူထားတာ ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် ၁၉
ဦးသာ လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်အသစ်တွေကို ထားဝယ်၊ ကျောက်ဖြူ၊ စစ်တွေ၊
ရေနက်ဆိပ်ကမ်းမြို့တွေကို လေယာဉ်ခရီးစဉ် အသစ်တွေအနေနဲ့ ပြေးဆွဲသွားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီး မြန်မာ့လေကြောင်းက
လေယာဉ်အသစ် နှစ်စင်းကို အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် ကုမုဒြာ ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
n Walker က၊ MTB, MTGA ရဲ့၊ ဖြစ်တည်ပုံ၊
ထပ်ဆင့်၊ ယခုလက်ရှိ MTGA ရဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေမူ့၊ (အများအသိပါ) (
၀န်ကြီးဌာနမှ၊ လိုအပ်ချက်များကိုတော့၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ၊ သတင်းပေးပို့၊
လုပ်ကိုင်ဖြေကြား ) သည်အခြေအနေတွေကို၊ အားကိုးလောက်ဘွယ်၊
သို့သော်လည်း၊ n Walker ရဲ့၊ တကိုယ်ရေယုံကြည်မူ့နဲ့၊
MTGA ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ n Walker နှင့်တကွ၊ တခြားသော၊ n Walker
လိုသူများတွေကိုမထိပါးစေခြင်လို့၊ MTGA ကို၊ ဦးတည်ပြီးသတိပေးရေးနေတာ၊
သည်နေ့မြန်မာပြည်စာပေလောကမှာ၊ ရေးနေကြတဲ့၊ စာရေးသူများဟာ၊
လက်တွေ့မဆန်တဲ့အလုပ်တွေကို၊ ပြောနေ၊ ဆိုနေ၊ ရေးနေ၊ ဝေဖန်နေတယ်လို့များ၊
ယခုလုပ်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို၊ မစဉ်းစားပဲ၊ ထောက်ခံလို့၊
ဦးစွာ၊ MTGA ကိုဝင်ရောက်မှသာ၊ အများအတွက်လက်တွေ့ဆန်တယ်လို့ဆိုလိုတာလား။
ဒါမှ၊ တကယ်၊ ညစ်စရာ၊ သံသယအပြည့်နဲ့၊ ညစ်ရပြန်ပြီ။
အတွေးရှင်းရင်၊ အရေးရှင်းမယ်။ အတွေးကောင်းရင်၊ အရေးကောင်းမယ်။
အတွေးတတ်ရင်၊ အရေးတတ်မယ်၊ အတွေးသန့်ရင်လဲ၊ အရေးသန့်မှာပဲ၊ ငါ့ညီ။
သည်နောက်၊ အပြောရော၊ အလုပ်ပါ၊ ရှင်း၊ ကောင်း၊ တတ်၊ သန့်ဖြစ်လာရမှာပေါ့။
သည်တော့၊ သူတပါးပြောတာကို၊ များများဖတ်၊ များများနားထောင်၊များများတွေး၊
ကောင်းကောင်းတွေး၊ ကောင်းကောင်းရေး၊ ကောင်းကောင်းပြော၊
ကောင်းကောင်းလုပ်ကွာ။ ၂ထောင့်ညီလို့၊ နှစ်နားညီတယ်လို့ချည်းပဲ၊
မျက်စေ့မှိတ်စွတ်မအော်မိစေနဲ့၊ ၂နားညီရင်၊ နှစ်ထောင့်ကလဲ၊
ညီနေတယ်ဆိုတာကိုလဲ၊ သိထားအုံးဟေ့၊ အကိုကြီးလို့ခေါ်လိုက်လို့၊
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပေါ့၊ သည်နေ့၊ MTGA
ရဲ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေမူ့တွေသည်၊ n Walker ရဲ့
သည်နေ့၊ MTGA ရဲ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေမူ့တွေသည် n Walker အတွက်၊
ဖြစ်လဲဖြစ်သင့်ပြီး၊ ရလဲရသင့်ကာ၊ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မူ့လဲရှိနေတဲ့၊
ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေကို၊ ထိပါးလာနေသည်လို့ ယူဆပြီး၊ သည်မီဒီယာကနေ၊
ရေးချပြောပြနေရပါသည်။ အလားတူ၊ သည်နေ့၊ MTGA ရဲ့တချို့သော၊
လွတ်လပ်သောလူမူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ် (သက်သက်) ဟန်အပြည့်ရှိနေရမည်ကို၊
ကျနော်၊ n Walker ပါ။ ယခုတလော၊ ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလို၊ ဒီမိုကရေစီ၊ နှင့်၊
အများအတွက်ဆိုတာထက်၊ ယခုလောလောဆယ်၊ တောင်းဆိုအကြံပြုနေတာမှန်သမျှသည်၊
အများအတွက်ရယ်၊ အပြုသဘောရယ်ဆိုတဲ့၊ စကားလုံးများ၊
နားထဲလျှံနေလှတဲ့၊ ကျနော်၊ n Walker။
On 12/30/11, khin thidar <gorose.myanmar@gmail.com> wrote:
> ဥက္ကဌကြီးလဲ ဘာမှမေးမရပါဘူး MTT လဲ ဘာမှမေးမရပါဘူး ဘာမေးလိုက်မေးလိုက်
> ၀န်ကြီးခဏခဏပြောလေ.ရှိတဲ. စကားလုံးအတိုင်း ၀ါးတားတား ဘဲဖြေကြပါတယ် ဘာမှ
> တိတိကျကျ မဖြေတာ ခက်ပါတယ် မေးပေါင်းလဲများလှပေါ. ကြာလာတော.မေးတဲ.လူတောင်
> လေကုန် လက်ပန်း ကျလာပါပြီ so far so good နေလိုက်တာမှ စိတ်ချမ်းသာရဦးမယ်
> ပြသနာက တာဝန်မခံရဲကြတာပါ အကြောက်ကြီး ကြောက်ကြတာပါ ဒီခေတ်ဟောင်းစနစ်ဟောင်းက
> ကြောက်မွေးတွေ ဇာဂနာနဲ. မနှုတ်သရွေ. ဂျပ်အေးသူ.အမေရိုက်နေဦးမှာပါ
> နှစ်သစ်မှာဧည်.လမ်းညွှန်အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ကျမ္မာပြီး
> တိုးတွေအများကြီးရ မုန်.ဘိုးအများကြီးပေးတဲ.ဧည်.သည်နဲ.ဘဲဆုံ( စပိန် လို
> ကော်များလဲ ၈၀% ရပြီး အနှောက်အယှက်ပယောဂဘေးများမှ ဝေးကြပါစေ။
> 2011/12/29 n Walker <corner88.mandalay@gmail.com>
>> အခုတလောကြားနေရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့၊
>> ဂီတစညိးအရုံးတို့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းကြဘို့ဆိုပဲ။ သည်အဖွဲ့အစည်းဟာ၊
>> တခုသောအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေ့တော့၊
>> ခေတ်ပြောင်းစံနစ်ပြောင်းဆိုတာနဲ့အညီ၊ သည်အဖွဲ့တွေက၊
>> မည်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မည်သည့်နိူင်ငံရေးအရောင်အသွေးတွေနဲ့မှ၊
>> မရောစွက်စေပဲ၊ အဖွဲ့သားတွေစစ်စစ်နဲ့ပဲ၊
>> လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်လာဘို့၊ ပြောနေလှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။
>> သည်အချိန်မှာ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်းဆိုတာက၊ ခုလို၊ သူများတွေ၊
>> ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ၊ ပြောင်းလဲဘို့ကြိုးစားတွန်းကန်နေကြချိန်မှာ၊
>> အများနည်းတူ၊ တက်ညီလက်ညီ၊
>> ၀န်ကြီးဌာနရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခံနေရမူ့တွေထဲကနေ၊ လွတ်ထွက်ပြီး၊
>> တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်၊ ရောက်ရှိအောင်၊
>> ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေကိုလဲ၊ ပုဂိုလ်ရေးအာဂတ၊ အုပ်စုအာဂတာတွေမထားကြပဲ၊
>> အားပေးသင့်ပါတယ်။ အကြံပြုသင့်ပါတယ်။ ဆိုတော့၊ n WAlker ပြောနေတာသည်၊
>> ဘယ်သူဥက္ကဌ၊ ဘယ်သူ၊ ဘာအဆင့်ဆိုတာမျိုးအတွက်၊
>> MTGA သည်၊ အစိုးရဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိူင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊
>> ဧည့်လမ်းညွှန်များသက်သက်များဖြင့်သာ၊ အများဆန္ဒနဲ့အညီ၊ ဖွဲ့စည်းကြပြီး၊
>> ဧည့်လမ်းညွှန်များအရေးသက်သက်သာ၊ လွတ်လပ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့၊
>> အလုပ်မျိုးတွေ၊ လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြင့်၊
>> တဘက်တလမ်းမှ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
>> ( Smart Card သည် MTGAကထုတ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာ နက ထုတ်တာပါ
>> ။ ယူနီဖောင်းဆိုတာလဲMTGA ကတီထွင်တာမဟုတ်ပါ ။ ၀န် ကြီးဌာနက အမိန်.ထုတ်တာပါ
>> ။) (မိမိတို့သိလို၊ မေးလို၊ ငြင်းလို၊ တာမှန်သမျှကို၊
>> ဆိုတဲ့၊ သတင်းဖြန့်ချီတာထက်၊ စာပို့လုလင်တာဝန်ထက်မပိုတဲ့၊
>> အလုပ်တာဝန်မျိုးနဲ့သာ၊ အဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်နေကြရင်၊ MTGA ဆိုတာရှိနေသရွေ့၊
>> ဟိုတယ်ခရီးအတွက်၊ နဂိုမူလသဘောသဘာဝအရ၊ တစစီရပ်တည်နေကြတဲ့၊
>> ဧည့်လမ်းညွှန်များထံ၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ လိုအပ်သလို၊
>> ထိန်းချုပ်ဆက်သွယ်နိူင်သည့်၊ ဆက်သွယ်ကြားခံတခုအဖြစ်သာရှိနေကြပါမယ်။
>> ( ဥက္ကဌ ဒေါ်ဌေးဌေးတင် စကားပြော foul
>> တာတွေရှိပေမယ်.အမှုဆောင် အများစုဟာ ဂိုဒ်တွေအားလုံးအကျိုးကို
>> စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ.လုပ်နေကြတာပါ )
>> ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲ၊ MTGA
>> သည်အဖွဲ့တခုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားရပ်တည်သင့်ကြပါတယ်။ တဦးတယောက်ကိုပဲ၊
>> ဦးတည်တဲ့၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဆန်တဲ့၊ ကောင်းမွေဆိုးမွေ၊ အရာရာကို၊ ဥက္ကဌ
>> ဆိုတာကိုပဲ၊ ပုံအပ်နေလို့မသင့်ပါ။ ဥက္ကဌဆိုတာကလဲ၊ သူမသိပါ၊
>> အောက်ခြေကလုပ်တာပါ၊ ဆိုတာမျိုးတွေလဲ၊ မဖြစ်သင့်ပါ။
>> အသင်းသားတယောက်ယောက်ကနေ၊ နားမလည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ n Walker
>> တို့မေးတာကိုလဲ၊ ညစ်တွန်းတွန်းတဲ့မေးခွန်းလို့ပဲထင်ထင်၊
>> ဖြေကြားရှင်းလင်းကြရာမှာ၊ တာဝန်ခံပြီးဖြေကြားပေးခြင်းမရှိပဲ၊
>> ဥက္ကဌကြီးသို့ဆိုတာမျိုး၊ တိုတယ်ခရီးသို့ဆိုတာမျိုးတွေ၊ လမ်းညွှန်ပေးတာကို၊
>> MTGA အဖွဲ့မှ၊ အတတ်နိူင်ဆုံးရှောင်ရှားပေးကြစေလိုကြောင်း၊ အပြုသဘောနဲ့၊
>> n Walker
>> On 12/28/11, minmin tun <minmin893@gmail.com> wrote:
>> > ကိုညီထိုက်ရေ သမ္မတဆီကိုတင်တဲ့စာ ရဲ့ ရက်စွဲလေးကို
>> > သေသေခြာခြာဖတ်ပေးပါခင်ဗျား။ ရက်စွဲက၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ ပါ။
>> > " > အဖြစ်မှန်မသိတဲ့၊သတင်းအတိအကျမရတဲ့ကျုပ်တို့လိုGuide
>> >> တွေရဲ့လက်မှတ်တွေယူပြီးလုပ်ထားတာလား၊ဖြေပါ။ " ဆိုတော့
>> > ၁၀ရက်နေ့ Asia Plaza ပွဲမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးထားတဲ့ စာရွတ်သည်
>> > လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေကိုပို့ဖို့သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။
>> > နောက်မေလမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မည် ဆိုသည်မှာ
>> > ဧည့်လမ်းညွှန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ရက်သတ်မှတ်မှာ
>> > ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိ MTGA မှ အရည်အချင်းရှိသော၊
>> > သဘောထားမှန်သောပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အများရွေးခြယ်ရင်
>> > ပြန်ပါလာပါလိမ့်မယ်။
>> > နောက်ကိုညီညီရဲ့စာကို ပြန်ရှင်းပြရရင်
>> > " သူတို.ပြောတဲ.ထဲမှာ MTGA ကထုတ်တဲ. စမတ်
>> > ကဒ် ကို မချိတ်ဆွဲ နိုင်ဘူးဆိုတာပါတယ် ။ Smart Card သည် MTGA
>> > ကထုတ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာ နက ထုတ်တာပါ ။ "
>> > ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ စဉ်းစားစရာတောင်မလိုအောင် ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ Tour Guide
>> > Licensed Smart Card မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
>> > " ယူနီဖောင်းဆိုတာလဲ
>> > MTGA ကတီထွင်တာမဟုတ်ပါ ။ ၀န် ကြီးဌာနက အမိန်.ထုတ်တာပါ ။ "
>> > ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ အဲ့ဒီအမိန့်စာလေး online တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။
>> > " MTGA ဟာ ၀န်ကြီးဌာနကို အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး ဂိုဒ်တွေဘက်က
>> > ခုခံကာကွယ်နေတဲ.အဖွဲ.ပါ ။ ဥက္ကဌ ဒေါ်ဌေးဌေးတင် စကားပြော foul
>> > တာတွေရှိပေမယ်.အမှုဆောင် အများစုဟာ ဂိုဒ်တွေအားလုံးအကျိုးကို
>> > စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ.လုပ်နေကြတာပါ ။ MTGA မှာ ပါတိုင်း လူဆိုးတွေလို.
>> > သတ်မှတ် လို.မရပါဘူး ။ လုပ် ချင်တယ် ဆိုရင် ၊ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင် MTGA
>> > အမှုဆောင်များအားလုံး အခုချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ပြီး အာ
>> > ဏာလွှဲပေးဖို.အသင်.ရှိပါတယ် ။ " ဧည့်လမ်းညွှန်တွေသည်
>> > ညီအစ်ကိုမောင်နှမ များသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်သူက လူဆိုး။ ဘယ်သူကသူခိုး။
>> > ဘယ်သူက အရူး။ ဘယ်သူက လူမိုက် ရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။
>> > ဒီနေရာမှာ ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ တချို့ရဲ့စေတနာက
>> > ၀က်သမားစေတနာဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်စေတနာပါ။ ၀က်သတ်သမားက
>> > ၀က်တွေမွေးထားပြီး အစာနေ့တိုင်းကျွေးတယ်တဲ့ အစာကျွေးရင်းနဲ့ ပြောသတဲ့
>> > "စား၊စား များများစား။ မင်းတို့များများစားမှ အသားတိုးပြီး
>> > အလေးချိန်စီးမှာ" ဆိုပြီးပြောသတဲ့။ နောက်စေတနာတစ်မျိုးက မိဘက
>> > သားသမီးကို အစာကျွေးရင်း သားသမီးစားနေတာကြည့်နေတဲ့ ပီတိ၊ စေတနာ
>> > ကမေတ္တာစေတနာ၊ ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်စေတနာက စေတနာမှန် ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
>> > ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်စေတနာနဲ့ ပရဟိတအကျိုး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်အများအကျိုးကို MTGA
>> > မှာလုပ်နေပါသလဲသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
>> > "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>> > Burma)" group.
>> > To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>> > travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>> > http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
Posted by Travel at 7:29 AM0comments
via သတင်း by lat@mizzima.com (ကိုဝိုင်း) on 12/28/11
နိုင်ငံတကာတွင် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုအတွက် အကူအညီများ ပေးနေသည့် OSI ခေါ် Open Sociaty Foundations ကို စတင်ထူထောင်သူ ဂျော့ဆိုးရော့စ် George Soros သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ...
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နိုင်ငံတကာတွင် ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုအတွက် အကူအညီများ ပေးနေသည့် OSI ခေါ် Open Sociaty Foundations ကို စတင်ထူထောင်သူ ဂျော့ဆိုးရော့စ် George Soros သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အင်းလေးကန်သို့ အလည်အပတ်ရောက်နေသည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"သူတည်းတဲ့ ခေါင်တိုင် ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်က တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို သွားတွေ့ပြီး ကျနော် သိရတယ်" ဟု ဦးဝင်းမြင့်က ဆိုသည်။
ဂျော့ဆိုးရော့စ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံရန် ရှိမရှိကိုမူ "သူခေါ်မှပဲ ကျနော်တို့ သွားမယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကတော့ ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားသားနဲ့ တွေ့ဖို့ မတွေ့ဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာ မရှိပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
ညောင်ရွှေမြို့နှင့် ၇ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် အင်းလေးကန်စပ်မှ ခေါင်တိုင်ကျေးရွာတွင် တည်းခိုနေသည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ် သည် အင်းလေးနှင့် ပုဂံဒေသရှိ ၎င်းလှူဒါန်းထားသည့် နေရာများသို့ အလည်အပတ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး လာမည့် လဆန်းတွင် ပြန်မည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ် အား အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက တွေ့ဆုံရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တဦးကလည်း ပြောသည်။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် ညနေပိုင်း တွေ့နိုင်ရန် ကြိုးစား
"သူ မနေ့က ဆရာဦးမြင့်တို့နဲ့ တွေ့တယ်လို့ကြားတယ်ဗျ။ ၂၆၊ ၂၇ က သူ ရန်ကုန်မှာရှိပြီး ဒီနေ့တော့ အင်းလေး သွားတယ် ပြောတယ်။ သူ့သားနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိသားစု ဒီမှာ vacation visit ပေါ့ဗျာ။" ဟု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အသက် ၈၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဂျော့ဆိုးရော့စ်ကို ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ၁၉၃၀ ခု သြဂုတ်လ တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ နာဇီဝါဒီများ၏ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်မှုမှ လွတ် မြောက်နိုင်ရန် ၁၉၄၇ ခုတွင် ဗြိတိန်သို့ ပြောင်းရွှေနေထိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုတွင် လန်ဒန်တွင် စီးပွားရေးဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့သည်။
အမေရိကန်အခြေစိုက် OSI ကို ဂျော့ဆိုးရော့စ်က ၁၉၉၃ ခုတွင် ထူထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကတို့ရှိ နိုင်ငံ ၇၀ ကျော်တွင် ရုံးခွဲများထားရှိပြီး လူ့အခွင့်အရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် စသည်တို့အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀၀ ကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ နှစ်သန်း သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။
Subscribe to သတင်း using Google Reader
Posted by Travel at 4:14 AM0comments
မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်သစ်နှစ်စင်း ဝယ်ယူမည်
Posted by Travel at 4:08 AM0comments
နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာဝင်နိုင်ရေး e-visa စနစ် အကောင်အထည်ဖော်
လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်များ၊ နယ်စပ်ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်များ၌
e-visa စနစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် online & Internet
တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုနှင့် ကော့သောင်းဒေသ ရွက်လှေခရီးစဉ်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်ဒေသ
ခရီးစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဟိုတယ်ဇုန်များ
တည်ဆောက်ရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို
ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း
ဝန်ကြီးဌာန နီလာအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ဦးတင့်ဆန်းတက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှု လွယ်ကူအဆင်ပြေရေး
ကော်မတီအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့
ဝင်ရောက်ရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်မှု ရှိစေရေးအတွက် e-visa စနစ်ဖြင့်
ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လေဆိပ်၊ ရေဆိပ်
ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များ၊ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များ ထွက်ပေါက်များ၌ online &
Internet တပ်ဆင်၍ စမ်းသပ်အသုံးပြုမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များ ဝင်ရောက်လာပါက
ဝင်/ထွက်ပေါက်များတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
အဆင်ပြေရေး၊ ဟိုတယ်အခန်း လုံလောက်မှုရှိစေရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှု
အဆင့်မြင့်မားရေး၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ခရီးစဉ်သစ်များ ဖော်ထုတ်ရေး စသည့်
လုပ်ငန်းစဉ်များသည်လည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဟိုတယ်ဇုန်များ
ထပ်မံဖော်ထုတ် တည်ဆောင်ရန်အတွက် ယခုအစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူများက
ဝိုင်းဝန်းအကြံပေး ဆွေးနွေးကြစေလိုကြောင်း၊ ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် CLMV
လေးနိုင်ငံ ခရီးစဉ်တစ်ခု ဖြစ်စေရေး အစီအစဉ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ်
မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
Posted by Travel at 4:06 AM0comments
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းလေဆိပ်များတွင် "အင်တာနက် တပ်ဆင်မည်
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပြည်တွင်းရှိ
နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းလေဆိပ်များတွင် အင်တာနက်စနစ်
တပ်ဆင်ပေးသွားမည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း သတင်းအချက်အလက်နှင့်
နည်းပညာဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးက ပြောသည်။
"ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ စတင်တပ်ဆင်ပေးနေပါပြီ။ နောက်ထပ် လေဆိပ်တွေကိုလည်း
တပ်ဆင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ လေဆိပ်သုံးခုမှာ တပ်ဆင်ပေးဖို့
ရှိပါတယ်" ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းလေဆိပ်များ၌
အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှု မရှိ၍ နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာသို့
လာရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက် အွန်လိုင်းမှ အီးဗီဇာလျှောက်ထားမှုများအား
တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်
ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ ထိုသို့ အင်တာနက်မရရှိခြင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ GMS Summit နေပြည်တော်ပွဲတွင် ဟိုတယ်နှင့်
ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက "နိုင်ငံခြားသား
ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အင်တာနက်စနစ်ကို
အသုံးပြုတာပါ။ အရင်က နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာချင်ရင်
ဥပမာ တရုတ်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာဖို့အတွက်
မြန်မာသံရုံးရှိတဲ့မြို့ကို တကူးတကသွားပြီး ဗီဇာလျှောက်ရတယ်။ အဲဒီတော့
ဧည့်သည်တော်တော်များများ အချိန်လည်းကုန်၊ ကုန်ကျစရိတ်ကုန်ပြီး
အဆင်မပြေဘူး။ ဒီအခက်အခဲတွေ အဆင်ပြေအောင် အီး-ဗီဇာစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းတွင်
ဖုန်းဘီလ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူခြင်းအတွက် e-ticket
စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခွန်ပေးဆောင်ရာ၌ e-custom ၊ အွန်လိုင်း
Shopping Mall များ ဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည့် စနစ်များရှိပြီး မကြာမီ e-visa
စနစ် ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
Posted by Travel at 4:05 AM0comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကန်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းတွင်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ Jiang Xi Leng Dai Culture Limited Company
နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ Asia Myanmar Consortium Development Co.,Ltd.
တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးရေခဲကမ္ဘာပြခန်းကို
မကြာမီဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပြခန်းအတွင်း ထားရှိမည့်
ရေခဲရုပ်တုများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ
လာရောက်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာဘက်မှ ထုဆစ်ထားသည့် ရုပ်တုများကို
သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှ ရွေးချယ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းပြခန်းအတွင်း
ဝင်နိုင်ရန် အအေးဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဝတ်စုံများထားရှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး
အကျယ်အဝန်းမှာ အလျား ၁၉၃ ပေ၊ အနံ ၁၃၅ ပေနှင့် အမြင့် ၁၈ ပေခွဲရှိကြောင်း
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
Posted by Travel at 4:00 AM0comments
Posted by Travel at 3:19 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များနှင့် 2011 ခုနှစ်ခရီး
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားသည် ဒီမိုကရေစီအခင်းအကျင်းသို့
ဦးတည်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ လိုအပ်ချက်တစ်ခုအရ
ပုဂ္ဂလိကဌာနဆိုင်ရာများ၊ အသီးအသီးသော လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ
တူရာတူရာ စုစည်း၍ အစုအဖွဲ့များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်
လိုအပ်လာသည်နှင့်အညီ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသင်းအဖွဲ့ပေါင်းများစွာ
မဖြစ်မနေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရသည်။ ထိုအထဲတွင်
မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း (MTGA) သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်အဖြစ်
၂။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊
၃။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် Refresher Course, Uniform, Roster
System စသည်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာတို့၏ဆန္ဒအရ ထွက်ပေါ်လာရပြီး
ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများလည်း တပြိုင်တည်းပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့သည်။
၄။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် (အရေးတယူဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိသေးသော်လည်း)
ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် အခက်အခဲများကို
၅။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ယခင်က ဧည့်လမ်းညွှန်အချင်းချင်း
မသိကျွမ်းခဲ့သူများ၊ တစ်ချိန်က မတွေ့ဘူး မမြင်ဘူး မဆုံဘူးခဲ့သူများ
၆။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် Internet, Email, Facebook စသည် On Line
ဆက်သွယ်မှုတို့ ယခင်ကထက် ပိုမိုမြင့်မားလာခဲ့သည်။
၇။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဧည့်လမ်းညွှန်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု
၈။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ လိုအပ်ချက်များ၊
အခက်အခဲများ စသည်တို့ကို ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်လာခဲ့သည်။
၈။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ယခင်က တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း
ဖြေရှင်း၍မရနိုင်သော ကိစ္စရပ်များ၊ ပြဿနာများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီကာ
၁၀။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် လက်ရှိတွင်
၁၁။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဒီမိုကရေစီအတွေးအမြင်များ၊ ဒီမိုကရေစီ
အထိအတွေ့များ၊ ဒီမိုကရေစီအသိဥာဏ်များ၊ ဒီမိုကရေစီပညာရည်နှင့်
၁၂။ MTGA ကိုဂေါင်တည်၍
လိမ့်မည်၊ ရပ်နေတာကောင်းသည်၊ မပတ်သက်တာကောင်းသည် စသည်
ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စေပြီး MTGA နှင့် ဒီမိုကရေစီအပေါ်ကိုပင် သံသယများ
၁၃။ MTGA ကိုဂေါင်တည်၍ ကြီုးနီစနစ်ကြင့်သုံးကာ ဧည့်လမ်းညွှန်များကို
၁၄။ MTGA ကိုဂေါင်တည်၍ ကြိူးနီစနစ်ကျင့်သုံးမှုကြောင့်
ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ဘဝကို ဧည့်လမ်းညွှန်များ ကသာ စီမံပိုင်ခွင့်ရှိသည်
ဆိုသည့်စကားမှာ ငုတ်ကွယ်နေခဲ့ရသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏လူ့အခွင့်အရေး
များဆုံးရှုံးနေရသည်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိမြင်လာရသည်။
၁၅။ MTGA ကိုဂေါင်တည်၍ ကြိူးနီစနစ်ကျင့်သုံးနေသူများကို ဆန့်ကျင်ခွင့်ရလာကြသည်။
၁၆။ MTGA ကို ဂေါင်တည်၍ ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်များ၊
သဘောထားများ စသည် မိမိတို့၏ ရင်တွင်းဖြစ်စကားများကို ဖေါ်ထုတ်ခွင့်၊
တင်ပြခွင့်၊ ရေးသားခွင့်၊ ရင်ဖွင့်ခွင့် ရလာခဲ့ကြသည်။
၁၇။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော
၁၈။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊
သာရေး၊ နာရေး စသည် ကိစ္စရပ်များကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးနိုင်လာခဲ့သည်။
၁၉။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် အချင်းချင်းအတွေ့အကြုံများဖလယ်ခြင်း၊
အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အတတ်ပညာရှင် အသိပညာရှင်များကို
ဖိတ်ကြား၍ ဟောပြောပို့ချသင်ကြားစေခြင်း စသည် ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏
ပညာရည်တိုးတက်မြင့်မားရေးတို့ကို ဆထက်တန်ဘိုး တိုး၍ ဆောင်ရွက်နိုင်လာ
၂၀။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်နှင့်လုပ်သားပြည်သူအများ
အတွက် (သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ထိန်သိမ်းရေး၊
၂၁။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များအား
အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ လေးစားစွာ ဆက်ဆံလာခြင်း၊ တလေးတစား ဖိတ်ကြားခံရခြင်း
စသည် ဧည့်လမ်းညွှန်များ ဂုဏ်ဒြပ်ထည်ဝါမြင့်မား လာခဲ့သည်။
၂၂။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့်
ရွက်ပုန်းသီးဖြစ်ခဲ့ရသော၊ ယခင်က မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်ခဲ့ရသော၊
မိမိတို့၏ထက်မြတ်သော အသိဥာဏ်၊ မိမိတို့၏ မတူညီသော ကွဲပြားသော
အသိအမြင်သဘောထားများကို ရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနိုင်လာခဲ့ သည်။
၂၃။ MTGA ဆိုသည့်အကြောင်းကြောင့် ဒီမိုကရေစီ၏ရသများကို
ခံစားခွင့်ရှိလာခဲ့ရသည်။ ဥပမာ- တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီသော
အတွေးအမြင်များ၊ မတူညီသောယုံကြည်ချက်များ၊ မတူညီသောသဘော ထားများကို
အပြင်မှရပ်ကြည့်ပြီးနားထောင်နေ ပါလျှင် အနည်းငယ်
ဆူညံပွက်လောရိုက်နေကြသည်၊ ရန်ဖြစ်နေကြသည်ဟု ထင်ကောင်းထင်မှတမှား
နေကြပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီ၏ သဘောတရားကိုက
အနည်းငယ်ဆူညံတတ်သည်မှာ သဘာဝဖြစ်သည်။ အဲဒါမှ
ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ပင်ဖြစ်တော့သည်။ (သို့သော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတို့ကို
ထိခိုက် စော်ကားခြင်းစသည် စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်မဖြစ်ရပါ။) တစ်ဦးတစ်ယောက်၏
အမိန့်အာဏာကိုကြောက် ရွံ့ပြီး မှားလည်းခံ၊ မတရားတာလည်းငုံ့ခံ၊
အနိုင်ကျင့်လည်းကြိတ်မှိတ်ခံနေပြီး ခိုင်းတာလုပ် ပြန်မပြောနဲ့ ဆိုတာ
ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါ။ ယခု ဧည့်လမ်းညွှန်များ ဒီမိုကရေစီ၏ ရသကို
အထိုက်အလျောက် ရရှိခံစား နေကြရပါပြီ။
၂၄။ MTGA အသင်းကြီးပေါ်လာသော်လည်း MTGAသည်
မည်သည့်လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်မျှမရှိသည့်အပြင်၊ MTGA အသင်းကသော်လည်းကောင်း၊
သက်ဆိုင်ရာဌာဆိုင်ရာနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းကောင်း ယနေ့အချိန်ထိ
ဧည့်လမ်းညွှန်များအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသောကိစ္စရပ်များအတွက် ရပ်တည်ပေးခြင်း၊
ဧည့်လမ်းညွှန်များအကျိုးတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိသေးပါ။
၂၅။ မိမိတို့ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်ပညာရည်နှင့်
ဧည့်လမ်းညွှန်ဘဝတိုးတက် မြင့်မားရေးတို့အတွက် စည်းကမ်းရှိပြီးစနစ်ကျသော
ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပညာ ရှင်ပညာတတ်များပီပီ
အချင်းချင်း နှီးနှောတိုင်ပင်ကာ ငြိမ်းချမ်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်
Posted by Travel at 11:54 PM0comments
Posted by Travel at 11:52 PM0comments
၄.၁.၂၀၁၂ (လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ) ဒေါ်နန်းစိန်သန်း (လူမှုရေးကော်မတီ၊
မန္တလေးဇုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း) ဦးဆောင်၍
ချောင်းဦးမြို့ရှိ "အေးရိပ်မွန်"အမျိုးသမီးမိဘမဲ့ကျောင်းသို့ အနွေးထည်
အထည်(၉၀) ကို သွားရောက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ Light Truck ကားဖြင့်
နေ့ချင်းပြန် သွားရောက်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
အတူလိုက်ပါမည့်သူအားလုံးကို နေ့လည်စာဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အတူပူးပေါင်း၍ အလှူငွေပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ၊ အတူလိုက်ပါ၍
လုပ်အားဒါနပြုပြီး ရေစက်ချအမျှပေးဝေလိုသူများ အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါရန်
အသေးစိပ်သိလိုပါက အောက်ပါဖုံးနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း
ဒေါ်နန်စိန်သန်း ( ဖုံး - 09 2110 234 )
Posted by Travel at 11:49 PM0comments
Urgent Req: Siebel Upgrade Specialist - 6/12 Months - CA
I am interested in speaking to you in regards to an opportunity with one of my clients.
The job description is as given below, kindly go through the requirement and send me your consultant's updated profile along with the below details required foraquick interview process.
Interviews/offers in pipeline(Yes/No):
Siebel Upgrade Specialist
Duration:6Months (Can be extended upto6months based on candidate's performance)
Start : 2-Jan-2012
We urgently need someone with extensive experience as Siebel Upgrade
Architect and Specialist (from Siebel 7.7.x to 8.1.1.x preferably).
This role is very critical for the success of the upgrade project and the client
is keen on havingaperson withagood Siebel upgrade background.
For any further assistance if required, You can reach me at ravikanth@axiustek.com or call me on 703- 738- 6662 Ext. 116.
20610 Quarter path Trace Circle|
Sterling, VA 20165 |
Direct: - 703-738-6662 ext 116|
URL : www.axiustek.com
Posted by Travel at 7:08 PM0comments
ဥက္ကဌကြီးလဲ ဘာမှမေးမရပါဘူး MTT လဲ ဘာမှမေးမရပါဘူး ဘာမေးလိုက်မေးလိုက် ၀န်ကြီးခဏခဏပြောလေ.ရှိတဲ. စကားလုံးအတိုင်း ၀ါးတားတား ဘဲဖြေကြပါတယ် ဘာမှ တိတိကျကျ မဖြေတာ ခက်ပါတယ် မေးပေါင်းလဲများလှပေါ. ကြာလာတော.မေးတဲ.လူတောင် လေကုန် လက်ပန်း ကျလာပါပြီ so far so good နေလိုက်တာမှ စိတ်ချမ်းသာရဦးမယ် ပြသနာက တာဝန်မခံရဲကြတာပါ အကြောက်ကြီး ကြောက်ကြတာပါ ဒီခေတ်ဟောင်းစနစ်ဟောင်းက ကြောက်မွေးတွေ ဇာဂနာနဲ. မနှုတ်သရွေ. ဂျပ်အေးသူ.အမေရိုက်နေဦးမှာပါ
နှစ်သစ်မှာဧည်.လမ်းညွှန်အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာ ကျမ္မာပြီး တိုးတွေအများကြီးရ မုန်.ဘိုးအများကြီးပေးတဲ.ဧည်.သည်နဲ.ဘဲဆုံ( စပိန် လို ကပ်စီးများနဲ.မဆုံ)
ကော်များလဲ ၈၀% ရပြီး အနှောက်အယှက်ပယောဂဘေးများမှ ဝေးကြပါစေ။
2011/12/29 n Walker <corner88.mandalay@gmail.com>
သည်အချိန်မှာ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်းဆိုတာက၊ ခုလို၊ သူများတွေ၊
ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေကိုလဲ၊ ပုဂိုလ်ရေးအာဂတ၊ အုပ်စုအာဂတာတွေမထားကြပဲ၊
အားပေးသင့်ပါတယ်။ အကြံပြုသင့်ပါတယ်။ ဆိုတော့၊ n WAlker ပြောနေတာသည်၊
ဘယ်သူဥက္ကဌ၊ ဘယ်သူ၊ ဘာအဆင့်ဆိုတာမျိုးအတွက်၊
MTGA သည်၊ အစိုးရဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိူင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊
ဧည့်လမ်းညွှန်များသက်သက်များဖြင့်သာ၊ အများဆန္ဒနဲ့အညီ၊ ဖွဲ့စည်းကြပြီး၊
တဘက်တလမ်းမှ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
( Smart Card သည် MTGAကထုတ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာ နက ထုတ်တာပါ
။ ယူနီဖောင်းဆိုတာလဲMTGA ကတီထွင်တာမဟုတ်ပါ ။ ၀န် ကြီးဌာနက အမိန်.ထုတ်တာပါ
။) (မိမိတို့သိလို၊ မေးလို၊ ငြင်းလို၊ တာမှန်သမျှကို၊
ဆိုတဲ့၊ သတင်းဖြန့်ချီတာထက်၊ စာပို့လုလင်တာဝန်ထက်မပိုတဲ့၊
အလုပ်တာဝန်မျိုးနဲ့သာ၊ အဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်နေကြရင်၊ MTGA ဆိုတာရှိနေသရွေ့၊
ဟိုတယ်ခရီးအတွက်၊ နဂိုမူလသဘောသဘာဝအရ၊ တစစီရပ်တည်နေကြတဲ့၊
ဧည့်လမ်းညွှန်များထံ၊ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ လိုအပ်သလို၊
( ဥက္ကဌ ဒေါ်ဌေးဌေးတင် စကားပြော foul
တာတွေရှိပေမယ်.အမှုဆောင် အများစုဟာ ဂိုဒ်တွေအားလုံးအကျိုးကို
ဦးတည်တဲ့၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဆန်တဲ့၊ ကောင်းမွေဆိုးမွေ၊ အရာရာကို၊ ဥက္ကဌ
ဆိုတာကိုပဲ၊ ပုံအပ်နေလို့မသင့်ပါ။ ဥက္ကဌဆိုတာကလဲ၊ သူမသိပါ၊
အောက်ခြေကလုပ်တာပါ၊ ဆိုတာမျိုးတွေလဲ၊ မဖြစ်သင့်ပါ။
အသင်းသားတယောက်ယောက်ကနေ၊ နားမလည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ n Walker
ဥက္ကဌကြီးသို့ဆိုတာမျိုး၊ တိုတယ်ခရီးသို့ဆိုတာမျိုးတွေ၊ လမ်းညွှန်ပေးတာကို၊
MTGA အဖွဲ့မှ၊ အတတ်နိူင်ဆုံးရှောင်ရှားပေးကြစေလိုကြောင်း၊ အပြုသဘောနဲ့၊
On 12/28/11, minmin tun <minmin893@gmail.com> wrote:
> ကိုညီထိုက်ရေ သမ္မတဆီကိုတင်တဲ့စာ ရဲ့ ရက်စွဲလေးကို
> သေသေခြာခြာဖတ်ပေးပါခင်ဗျား။ ရက်စွဲက၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ ပါ။
> " > အဖြစ်မှန်မသိတဲ့၊သတင်းအတိအကျမရတဲ့ကျုပ်တို့လိုGuide
>> တွေရဲ့လက်မှတ်တွေယူပြီးလုပ်ထားတာလား၊ဖြေပါ။ " ဆိုတော့
> ၁၀ရက်နေ့ Asia Plaza ပွဲမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးထားတဲ့ စာရွတ်သည်
> လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေကိုပို့ဖို့သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။
> နောက်မေလမှာ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မည် ဆိုသည်မှာ
> ဧည့်လမ်းညွှန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ရက်သတ်မှတ်မှာ
> ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိ MTGA မှ အရည်အချင်းရှိသော၊
> သဘောထားမှန်သောပုဂ္ဂိုလ်များလည်း မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အများရွေးခြယ်ရင်
> နောက်ကိုညီညီရဲ့စာကို ပြန်ရှင်းပြရရင်
> " သူတို.ပြောတဲ.ထဲမှာ MTGA ကထုတ်တဲ. စမတ်
> ကဒ် ကို မချိတ်ဆွဲ နိုင်ဘူးဆိုတာပါတယ် ။ Smart Card သည် MTGA
> ကထုတ်တာမဟုတ်ပါ ၊ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာ နက ထုတ်တာပါ ။ "
> ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ စဉ်းစားစရာတောင်မလိုအောင် ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ Tour Guide
> Licensed Smart Card မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
> " ယူနီဖောင်းဆိုတာလဲ
> MTGA ကတီထွင်တာမဟုတ်ပါ ။ ၀န် ကြီးဌာနက အမိန်.ထုတ်တာပါ ။ "
> ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ အဲ့ဒီအမိန့်စာလေး online တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။
> " MTGA ဟာ ၀န်ကြီးဌာနကို အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး ဂိုဒ်တွေဘက်က
> ခုခံကာကွယ်နေတဲ.အဖွဲ.ပါ ။ ဥက္ကဌ ဒေါ်ဌေးဌေးတင် စကားပြော foul
> တာတွေရှိပေမယ်.အမှုဆောင် အများစုဟာ ဂိုဒ်တွေအားလုံးအကျိုးကို
> စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ.လုပ်နေကြတာပါ ။ MTGA မှာ ပါတိုင်း လူဆိုးတွေလို.
> သတ်မှတ် လို.မရပါဘူး ။ လုပ် ချင်တယ် ဆိုရင် ၊ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင် MTGA
> အမှုဆောင်များအားလုံး အခုချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ပြီး အာ
> ဏာလွှဲပေးဖို.အသင်.ရှိပါတယ် ။ " ဧည့်လမ်းညွှန်တွေသည်
> ညီအစ်ကိုမောင်နှမ များသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်သူက လူဆိုး။ ဘယ်သူကသူခိုး။
> ဘယ်သူက အရူး။ ဘယ်သူက လူမိုက် ရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။
> ဒီနေရာမှာ ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ တချို့ရဲ့စေတနာက
> ၀က်သမားစေတနာဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်စေတနာပါ။ ၀က်သတ်သမားက
> ၀က်တွေမွေးထားပြီး အစာနေ့တိုင်းကျွေးတယ်တဲ့ အစာကျွေးရင်းနဲ့ ပြောသတဲ့
> "စား၊စား များများစား။ မင်းတို့များများစားမှ အသားတိုးပြီး
> အလေးချိန်စီးမှာ" ဆိုပြီးပြောသတဲ့။ နောက်စေတနာတစ်မျိုးက မိဘက
> သားသမီးကို အစာကျွေးရင်း သားသမီးစားနေတာကြည့်နေတဲ့ ပီတိ၊ စေတနာ
> ကမေတ္တာစေတနာ၊ ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်စေတနာက စေတနာမှန် ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
> ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်စေတနာနဲ့ ပရဟိတအကျိုး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်အများအကျိုးကို MTGA
Posted by Travel at 6:04 PM0comments